Izaddiin Kamaal: Dargaggeessa umurii 17 abbaa kalaqoota 27 ta'e - BBC News Afaan Oromoo
Izaddiin Kamaal: Dargaggeessa umurii 17 abbaa kalaqoota 27 ta'e
30 Waxabajjii 2019
Image copyright Asegid Sileshi
Goodayyaa suuraa Izaddiin Kamaal hojii kalaqaa saatiin MM Dr Abiy harkaa waragaa ragaa wayita fudhatu
"Namni waa kalaqu kamuu rakkina keesa darburraa ka'uun ta'u danda'a'' kan jedhu Izaddiin Kamaal, attamiin akka hojii kalaqaa kana eegale BBC'tti himeera.
Bisikileetii peedaalii malee annisaa aduutiin akka motaraatti socha'u
Izaddiin Jamaal dagaggeessa hojiiwwan kalaqaa hedduun beekkamtii argateedha. Fakkeenyaaf, kophee hanguma ittiin tarkaanfattaniin annisaa aduun bilbila chaarjessu, meeshaa dammaqsituu bilbilaa jariikaana irratti maxxansuun wayita balaan abiiddaa uumamuu iyyiituu, fi kanneen kan fakkaata 23 ol hojjateera.
Izaddiin lammii Itoophiyaa fi dargaggoo waggaa 17 yoo ta'u, kalaqawwan tajaajila kennan kanneen hojjachuu kan eegale wayita umuriinsaa waggaa 14 ta'urraa eegaalee akka ta'e dubbata.
Yaadni kalaqaa kun attamiin dhufeef? Maaltu isa kakkaase? Gara fuula duraatti hoo abjuu maal qaba?
Barataa yunvarsiitii abbaa kalaqa 'Wi-Power' fi kanneen biroo 20 olii
Kalaqa foormulaa haaraa hanga pirojektii Oroonjiituu
Izaddiin barataa Yunivarsitii Walqixxee yoo ta'u, dhalatee kan guddatees achuma Walqixxee bakka Gubire jedhamuutti. Hojjiiwwan kalaqaa hanga ammaatti hojjateefis waraqaa ragaa hedduu argateera.
Bakki inni itti dhalatee guddattes magaalaa Finfinneerraa waan fagaatuuf meeshaalee hojiisaatiif barbaachisan kan akka kompitaraa, intarneetii fi kanneen biroo akka garaatti argachuu dhabuunsaa Izaddiiniin abdii hinkutachiifne.
Meeshaaleedhuma naannoosaatti argamanitti fayyadamuun, yeroo tokko tokkoos gara magaalaa Finfinnee deemuun meeshaalee tajaajilanii gataman ykn meeshaalee kaan Markaatoodhaa gatii gad'aanaan bitachuun hojiiwwan kalaqaasaa hojjachuuf yaade akka raawwatu dubbata.
Dargaggeessi kalaqawwan annisaa ifa aduurraa omishuun hojjiirra olchuuf hojjataa jiru kuni, yaadni attamiin akka dhufuuf ilaalchisee ''namni kamiiyyuu waa kalaquu yoo barbaadu rakkina isaa irraa ka'uunii'' jechuun ka'uumsa hojiisaa dubbata.
Image copyright Ezedin Kamil
Goodayyaa suuraa Bilbila keessan Kopheedhaan chaarjii taasisuuf yaaddanii beektuu?
Hojiiwwan kalaqaa kan biraa
Yeroo tokko tokko bilbila harkaa keenyaa chaarjii godhachuun manaa banulleen darbee darbee haalli osoo deebiin hingaliin dura baatiiriin itti dhumu jiraachu danda'a.
Yeroo tokko tokoos faalama naannootiif yaadamee haa ta'u, filannoowwan geejibaa maallaqa hinbaafnee fi kan hin dadhabsiifne namoonni barbaadanis hin dhiban ta'a.
Darbee darbees nama haala sardamaa keessatti argamuun waa hojjachuuf eegalanii dagatanii deemuun ni umama ta'a. Fakkeenyaaf shaamaa qabsiifne osoo hindhaamsiin ykn waa bilcheessuuf abidda irratti kaa'uun daggachu bahamu danda'ama.
Muddannoowwan akkasii kanaafis Izaddiin waan kalaqe qaba. Ifa aduutti fayyadamuun kophee bilbila harkaa chaarjessu, peedaalii akka motar saayikilii ifa aduutiin hojjatu, akkasumas meeshaalee ibsaa mana keessatti hin badiin hafan balleessuuf gargaaruu fi meeshaalee tibba balaan abiiddaa uumamuutti akka dammaqsituutti tajaajilu uumeera.
Waliigalatti Izaddiin hojiiwwan kalaqaa 27 kan hojjate yoo ta'u kanneen keessayyis muraasi asiin gadi suuraarratti argama.
Hattuun mana itti guddatee yoo rukuttu...
Rakkina keessa darbamu fala barbaachaas ka'umsa gaaii ta'a kan jedhuu Izaddiin, guyyaa tokko bilbila isaa chaarjiirratti manatti dhiisee bahuun yoo deebi'u waan ollaatti umameen kalaqa saa tokkoof ka'umsa ta'u hima.
Muddanichi akkas ture. ''Yoo deebii'u manni ollaa keenyaa abidaan qabateen arge. Anis naasuun bakkuman jiruutti gogee hafe. Achinis namoonni abiddicha balleessuuf asiifi achii yoo fiigan anis kan gahee kiyyaa gummaachuuf yaale. Osoon kana gochaa jiruu garuu yaadni tokko gara sammuu kiyyaatti na dhufe,''jedha Izaddiin.
"Beela bara ijoollummaatu kalaqa kanaaf na kakaase"
Osoo bilbilli chaarjiirratti dhiisee bahe sun kan balaa abidichaaf qaqabu ta'ee jedhee yaadu hima.
Kalaqichis kan jariikaanii irraa hojjatameedha. Yaada kanas gara hojiitti geedaruuf, meeshaa aara abiddaa adda baasuun mallattoo akkeekachisaa namoota naannichatti argamaniif kennuu hojjachuuf yaade. Kana malees bilbilli jarkaanicharratti hidhame kan namoonni hinqaqabne ypoo ta'e, sararawwan lama (abbaa manaa fi garee balaa abiddaa balleessan)tti bilbiluun akka ergaa dabarsu kan taasisuudha.
Skip Facebook post by U.S. Embassy Addis Ababa
Our Solve IT! competition focuses on empowering youth to make their communities better and stronger. And our featured...
Posted by U.S. Embassy Addis Ababa on Thursday, 6 June 2019
End of Facebook post by U.S. Embassy Addis Ababa
Kalaqni 'Eksi Faayer' jechuun moggaase kunis, ''wayita balaan abiiddaa umamuutti gochawwan gurguddaa sadii raawwata. Jalqaba namoota naannichatti argamaniifi ollaaf waamicha dabarsa. Ittaansee ammoo, balaan abiddaa qaqabuusaa abbootii qabeenyaa fi qaamoolee abiddaa ittisanitti bilbiluun beeksiisa. Kana wayita taasisuuttis kaarboon daayiyoksaayid facaasuun abiiddicha balleessuuf yaalii taasisa,''jechuun kalaqichi attamiin akka hojjatu hima Izaddiin.
Teknolojiiwwan akkasii nageenya mana keessa eegu danda;an gatii olaanaan kan dhiyaatan waan ta'eef, meeeshaalee baayyee hinbarbaachifne fakkaachu danda'u, garuu wanta baayyee barbaachisaadha jedha Izaddiin.
Kana malees, meeshaan hattuun yoo gara mana nama tokkoo seenutti sagalee dhageessisuuf jiraachu himeera.
"Hattichi harkatti gatoo kaawwatulleen, meeshichi adda baasuun beeku danda'u. Meeshichis mallattoo kan kennuu yoo hattichi harkaan xuqee qofaadha,'' kan jedhu Izaddiin, kalaqni kunis waa akka isa hanqatuu fi kalaqoonni biraa hojjachuuf yaadu hedduun jiraachuulleen BBC'tti himeera.
Image copyright Cheramlak Mengistu/Ezedin Kamil
Izaddiin Kamaal harraa fi boruu
Izaddiin hojiiwwan kalaqaa hanga ammaatti hojjatee namoota deeggarsa taasisaniif galateefatu baayye qaba. Jalqabattis yunvarsitii itti baratuun deeggarsa meeshaalee fi hamlee kannaniif galateeffateera.
Akkasumas, dhaabbilee kaatoliikii fi artistoonni Xaaliyaanii lama deeggarsa walitti aansuun waggoota sadiif taasisaniif akkasumas kannaa laptoppii lamaa, softiweerii Ardiiwiino jedhamuuf qarshii kuma 34 waan kennaniif guddaan galateeffadha jedheera.
Dorgommii dhiheenya kan irratti hirmaateenis badhaasa qarshii kuma 300 kan argate yoo ta'u, ammas kalqawwan jaha hojjachuun akka dhiyeessu gaafatamus himeera. ''Amma baayyeen gammada waanan kalaqawwan itti aanan jahan meessaa sirriin hojjadhee dhiyeessuu danda'uuf,'' jedheera.
Waraqaalee ragaa dhaabbilee, qaamolee fi namoota adda addaa irraa argachu kan himu Izaddiin, hunda caalaa Ministira Mummeetiin beekkamtii argachuun badhaafamuunsaa caalaa gara fuuladuraatti biyya saa qofaf osoo hintaane ardiidhaafillee waa baayyee gumaachu akka danda'u abdii kan laateef ta'u himeera.
Abjuun dargaggummaa isaa maal akka ta'ee gaafatamees, ''osoon carraa barnoota biyya alaa argadhee kana caalaa haala fooyyaa'e hoajjachu danda'e gammachuun kiyya daangaa hinqabu ture,'' jechuun hawiisaa BBC'tti himeera.
Gumaata Kaampaasii 6: Kalaqa foormulaa haaraa hanga pirojektii Oroonjiituu
19 Muddee 2018
Viidiyoo Kalaqxoota BBC: Kalaqa qisaasama nyaataa oolche
20 Fuulbana 2018
Gumaata Kaampaasii 4: Kalaqa maashina shaayiirraa hanga 'Wi-Power'
5 Muddee 2018
MM Dr Abiy Ahimad godaantota 100 oli waliin biyyatti deebii'an
Dooniin Iiraan boba'aa feetu qabamte ture gadhiifamte
Boombiin cidharratti dho'ee namoota 63 galaafate
Maamilli nyaanni jalaa ture keessummeessaa ajjeese
Pep Gaardiyoolaan 'Murtoo VAR fudhachuu qabna' jedhan
Lammiileen Sudaan gammachuu ibsatan
Ijoolleen guyyoota 16'f galaana irra turan Xaaliyaan galuuf
Walloo Kibbaatti namoonni sadii ajjeefamanii torba madaa'aniiru
'Namoota 15 taanee baanee ani qofti lubbuun hafe'